ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများ > ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်စာတစ်စောင်
ခရစ်ယာန်များစွာသည်မသေချာမရေရာဖြစ်နေပြီးဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုချစ်ဆဲဆဲလား။ ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မည်ဟု ပို၍ စိုးရိမ်သည်။ သင်အလားတူကြောက်ရွံ့မှုမျိုးရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်တွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိုးရိမ်ပူပန်ကြတာလဲ။ အဖြေမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်။ သူတို့၏အမှားများ၊ သူတို့၏အမှားများ - သူတို့၏အပြစ်များကိုသူတို့နာကျင်စွာခံစားနေရသည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းပင်ဘုရားသခင့်စကားကိုနားထောင်ခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်ကြောင်းသူတို့သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ဘုရားသခင်အားခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ သူတို့ကနက်ရှိုင်းသော၊ အတွင်းစိတ်စိတ်ကိုနိုးထစေလျှင်သူတို့၏နောက်သို့လှည့်မသွားဘဲဘုရားသခင်ကိုအလွန်ဝမ်းနည်းကြောင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်မှုတောင်းခံနေကြသည်။
ဒါဟာငါ့ကို Hamlet, ရှိတ်စပီးယားကပြဇာတ်၏သတိပေးနေပါတယ်။ ဒီပုံပြင်မှာတော့မင်းသား Hamlet ကသူ့ ဦး လေး Klaudius ဟာ Hamlet ရဲ့ဖခင်ကိုသတ်ပြီးနန်းတော်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့သူ့အမေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ် ရလဒ်အနေနှင့် Hamlet သည်သူ၏ ဦး လေး / ပထွေးကိုလက်စားချေရန်လျှို့ဝှက်စွာကြံစည်နေပါသည်။ အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရလာပေမယ့်ဘုရင်ကဆုတောင်းနေတုန်း Hamlet ကတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်။ သူက ၀ န်ခံစဉ်မှာသူ့ကိုသတ်မယ်ဆိုရင်သူကောင်းကင်ကိုသွားမယ်လို့ဟမ်းလက်ကောက်ချက်ချ သူဟာနောက်တစ်ခါအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုငါသတ်ပြီးသတ်မယ်ဆိုရင်သူသိရင်ငရဲကိုသွားမယ်။ လူများစွာသည် Hamlet ၏ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့၏အပြစ်အကြောင်းအတွေးများကိုဝေမျှကြသည်။
Es gibt keine Barriere, keine Trennung zwischen Mensch und Gott, weil Jesus sie niedergerissen hat, und weil er in seinem eigenen Wesen die Menschheit in die Liebe des Vaters hineingezogen hat (1. ဂျိုဟန် 2,1; ယော ၁2,32). Die einzige Barriere ist eine eingebildete (Kolosser 1,21), die wir Menschen durch unsere eigene Selbstsucht, Angst und Unabhängigkeit aufgerichtet haben. Beim Evangelium geht es nicht darum, dass wir etwas tun oder etwas glauben, was Gott dazu bringt, unseren Status von ungeliebt auf geliebt zu verändern.
Gottes Liebe hängt nicht von irgendetwas ab, was wir tun oder nicht tun. Das Evangelium ist eine Erklärung was bereits wahr ist – eine Erklärung der unnachgiebigen Liebe des Vaters für die ganze Menschheit, die in Jesus Christus durch den Heiligen Geist offenbar wurde. Gott liebte Sie, bevor Sie je irgendetwas bereut oder geglaubt hatten, und nichts, was Sie oder jemand anders je tut, wird dies ändern (Römer 5,8; 8,31-39) ။
Es ist niemand anders als Jesus, unser Erlöser, der alle unsere Sünden auf sich nahm, der auch durch den Heiligen Geist in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt (Philipper 4,13; ဧဖက် 2,8-10). Wir können uns aus ganzem Herzen hingeben, um ihm nachzufolgen, im Wissen, dass er uns bereits vergeben hat, wenn wir versagen. Denken Sie darüber nach! Gott ist nicht eine Gottheit, die uns weit weg, dort draussen im Himmel beobachtet, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dem Sie und alle anderen leben, weben und sind (Apostelgeschichte 17,28). Er liebt Sie so sehr, ohne Rücksicht darauf, wer Sie sind oder was Sie getan haben, dass er in Christus, dem Sohn Gottes, der ins menschliche Fleisch kam – und durch den Heiligen Geist in unser Fleisch kommt – Ihre Entfremdung, Ihre Ängste, Ihre Sünden wegnahm, und Sie durch seine rettende Gnade heilte. Er entfernte jede Barriere zwischen Ihnen und ihm.